Okpomọkụ usoro Nsukka | China okpomọkụ usoro Factory & Suppliers
MD-TB Mgbawa-Ngosiputa ọnọdụ okpomọkụ ọnọdụ
The MD-TB gbawara mgbawa-àmà okpomọkụ transmitter bụ a dikpọ oku mgba ọkụ nwere ọgụgụ isi okpomọkụ transmitter, Wuru na-dị dị PT100 elu-nkenke okpomọkụ ihe mmetụta, onwem na dijitalụ DIP mgba ọkụ nwere ọgụgụ isi okpomọkụ transmitter circuit board, ntinye na mmepụta iche imewe.
MD-TA kọmpat okpomọkụ transmitter bụ integrated àjà ihe ọ ultraụ -ụ mụ ala okpomọkụ transmitter na a wuru na-dị dị PT100 elu-nkenke okpomọkụ mmetụta. Ọ na - anabata kọmpụta kọmpụta yana mwepu na ntinye iche.
Onye na-ebugharị ọnọdụ okpomọkụ a na-agbaso usoro sekit nke nchebe ọkụ na nnyonye anya na-egbochi ọkụ eletrik (otu usu). Ọ nwere ọrụ nchedo ọkụ nke ọkụ ọkụ na-echebe
ndeksi esịmde ọkụ ọkụ ọkụ (≤iA4000V) maka oge 5 na-aga n'ihu na-enweghị mmebi nke akụrụngwa ahụ. Ntinye na mmeputa nwere ike iguzogide nnyonye anya iA4000V site na ngwa ngwa eletriki ngwa ngwa (otu usu). Ngwaahịa a nwere ike ichebe mmebi nke ọma n'ihi ọkụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ịmalite ma kwụsị nke nnukwu ụlọ ọrụ dị ike na sistemụ ọkụ, mmejọ sekit, ọrụ nke ngwa ntụgharị na welder eletrik na ebe a na-ewu ụlọ wdg. Ngwaahịa a nwere ike igbochi mmebi kpatara site na ọkụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ mmalite nkwụsị nke ngwa ngwa ike dị elu na sistemụ ike, ọdịda akara, arụmọrụ mgbanwe, ọrụ nke ngwa ntụgharị ugboro ugboro, na igwe ịgbado ọkụ n'oge ọrụ ubi.
Nyocha na ụlọ nke ngwaahịa a bụ nke 316L igwe anaghị agba nchara, ihe owuwu ahụ bụ laser welded, na njikọ njikọ ahụ na-akwado IP67 nkwụnye ụgbọelu na-enweghị mmiri, nke na-ekwe nkwa nkwụsi ike ogologo oge na ntụkwasị obi nke ngwaahịa a.
MD-HT101 usoro usoro okpomọkụ na ihu igwe
68x50mm nnukwu ihuenyo LCD ngosi
Mgbochi mgbochi nnyonye anya, mmepụta dịpụrụ adịpụ
Nhọrọ 4 ~ 20mA ma ọ bụ RS485
Nhọrọ nkewa nyocha
Nkwado nhọrọ onwe nke oke na nhazi oke nhazi
MD-T 2088 okpomọkụ Transmitter
MD-T2088 bụ onye na-ebugharị ihe ọkụkụ dijitalụ na ngosipụta, nke e wuru na ihe mmetụta okpomọkụ dị elu, nwere ike igosipụta ọnọdụ okpomọkụ na ezigbo oge, ma nwee ike ibunye mgbaàmà ọnọdụ okpomọkụ n'ụzọ dịpụrụ adịpụ, yana oke nkenke na ogologo oge nkwụsi ike.
Igwe okpomọkụ a na-ewebata ihuenyo ngosi LCD, na-arụ ọrụ dị iche iche dịka ịgbanwee Celsius / Fahrenheit, nhazigharị zuru oke, nzacha dijitalụ, wdg, ọrụ dị mfe na nrụnye dị mfe.
Ngwaahịa a nwere ike ịlele mmiri, mmanụ, ikuku na ndị ọzọ na-abụghị corrosive media na igwe anaghị agba nchara. A na-eji PT100 dị elu dị ka ihe mmụba nke okpomọkụ. Thezọ ntụgharị ahụ na-eji ntinye nyocha nyocha nke okpomọkụ, na sekit ahụ na-eme 0-60 ihere ọnọdụ okpomọkụ.
MD-T200 NKWUKWU DIGITAL THERMOMETER
Obere ike oriri, ike batrị, ogologo ndụ batrị Nyocha ogologo na ọnọdụ okpomọkụ dị nhọrọ
batrị kwadoro ma ọ bụ externally kwadoro 5 digits LCD
Elu okpomọkụ ziri ezi
Mpempe ụlọ ụlọ 304, nke siri ike ma sie ike
Nkwado ndị ahịa na-na saịtị okpomọkụ mmezi Kemeghi mmesho ọsọ ọsọ
Automatic ndekọ kacha na kacha nta uru
MD- T560 DIGITAL REMOTE TERMOMETER
MD-T560 dijitalụ dijitalụ temometa bụ temometa na ngosi LCD dijitalụ, wuru na-elu-nkenke okpomọkụ ihe mmetụta, ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi na-egosipụta okpomọkụ na ozugbo & nwere
na-ebugharị ihe mgbaàmà nke okpomọkụ, na njirimara nke oke ziri ezi na ogologo oge
Igwe mmiri a dịpụrụ adịpụ nakweere ngosi LCD na ọrụ dịgasị iche iche dị ka ịgbanwee Celsius / Fahrenheit, nhazigharị zuru oke, na nzacha dijitalụ. Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ ma dị mfe iji wụnye.
Ngwaahịa a nwere ike ịlele mmiri, mmanụ, ikuku na igwe anaghị agba nchara. A na-eji PT100 dị elu dị ka ihe mmụba nke okpomọkụ. Thezọ ihe atụ na-anabata nyocha okpomọkụ iji kpọtụrụ ma tinye. Sekit ahụ na-akwụ ụgwọ ọnọdụ ọrụ site na 0 ruo ogo 60